Maxaa xiga tallaabada uu qaaday ROOBLE ee uu kaga horyimid qorshaha Farmaajo? | BANAADIRSOM
Home Wararka Maanta Maxaa xiga tallaabada uu qaaday ROOBLE ee uu kaga horyimid qorshaha Farmaajo?
Maxaa xiga tallaabada uu qaaday ROOBLE ee uu kaga horyimid qorshaha Farmaajo?
Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa shalay jawaab rasmi ah ka bixiyey dagaal siyaasadeed ka dhex-qarxay isaga iyo madaxweyne Maxamed Cabdullahi Farmaajo.
Dagaalkan ayaa soo shaac baxay kadib markii Farmaajo uu soo saaray wareegto u muuqata in lagu beegsaday Rooble oo lagu sheegay “in laga reebay xukuumadda iyo hay’adaha dowladda inay galaan is-afgarad ama wadahadallo saameynaya mustaqbalka dalka, madaxbannaanida qaranka, seeraha dhuleed iyo badeed ee dalka, iyo ganacsi lala galo dowlado kale inta doorashooyinka dalka lagu guda jiro.”
Rooble ayaa sheegay in isaga cuskanaya Qodobka 97-aad faqradiisa 1-aad ee Dastuurka KMG ah, awoodda fulinta ee Jamhuuriyadda Federaalka ah ay leeyihiin golaha Wasiirrada, ayna u qabanayaan sida Dastuurka ku tilmaaman, ay tahay hay’adda ugu sarreyso fulinta maamulka dalka.
Maxaa xiga tallaabada uu qaaday Rooble?
Arbushaadda iyo daan-daansiga siyaasadeed ee Farmaajo iyo jawaabta Rooble ayaa waxaa xigi doona waxa dhaca Talaadada, marka uu ra’iisul wasaaraha Rooble tago dalka Kenya, halkaasi oo uu kula kulmi doono Uhuru Kenyatta.
Waxaa la dhowrayaa tallaabada uu qaadi doono Rooble. Haddii uu ra’iisul wasaaraha saxiixo heshiiska ganacsi ee Kenya, dibna u fasaxo qaadka Kenya, waxay ka dhignaan doonta in isaga iyo Farmaajo ay kala tageen, islamarkaana ra’iisul wasaaraha uu muujiyey in Farmaajo muddo xileedkiisu dhacay, oo talada iyo go’aanada xukuumadda ay isaga ka fulaan.
Si kastaba, haddii Rooble uu safarkaas kasoo noqdo isaga oo aan dib u fasaxin qaadka Kenya, ama aan heshiis soo gelin, waxay tusmeyn doontaa in talada iyo awoodda xukuumadda ay gacanta ugu jirto Farmaajo, oo Rooble uu weli yahay maahsanihii lagu sheegi jiray.
Haddii Rooble uu qaadka dib u fasaxo, waxay sidoo kale ka dhignaan doontaa in Farmaajo si rasmi ah uu siyaasad ahaan u dhintay, waxayna wareegtadii uu soo saaray isugu rogi doontaa mid ka mid ah gefefkii siyaasadeed ee ugu weynaa ee uu galo.
Dhinaca kale, dagaalkan siyaasadeed ayaa waxaa aad u daawanaya musharaxiinta mucaaradka, oo eegaya sida Rooble u falceliyo.
Haddii Rooble uu fasaxo qaadka Kenya, una bareero dagaalka Farmaajo, waxay kaga faa’iideysan karaan inay kusii dhowaadaan ra’iisul wasaaraha oo gacanta ku haya maamulka doorashada, taasi oo wiiqi karta rajada dib u doorasho ee Farmaajo.
Previous articleYAAB!Koox Premier League Ah Oo Dalab Ka Gudbisay Lionel Messi, Mana Ahan Man City. – Banaadirsom
Next articleSidee aqoonyahannada u fasireen dagaalka ka dhex-qarxay Farmaajo iyo Rooble?